Ogaden News Agency (ONA) – Rabshado Maraykanka Ka Dhacay oo Khasaare Gaystay.
Rabshado Maraykanka Ka Dhacay oo Khasaare Gaystay.
Posted by ONA Admin	/ August 14, 2017
Rabshado ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobalka Virginia ayaa hal qof uu ku dhintay 35 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay kadib markii nin cunsuri ah uu gaadhigiisa ku dhuftay boqolaal dad ah oo dhigay mudaharaad looga soo horjeedo isu soo bax ay dhigayeen koox kale oo cunsuriyiin ah.
Booliiska ayaa falkan u qabtay nin 20 sano jir ah oo lagu magacaabo James Alex Fields oo kasoo jeeda gobalka Ohio kaasi oo ka mid ahaa cunsuriyiinta maalmihii lasoo dhaafay banaanbaxa ka dhigayey magaalada Charlottesville.
Banaanbaxyada ayaa bilowday Jimcihii kadib markii ururada cunsuriyiinta cadaanka ah ee ka jira Maraykanka ay isugu yimaadeen magaalada Charlottesville si ay uga hortagaan in la dajiyo taalo loo dhisay hogaamiyihii Robert E Lee oo ahaa ninkii hogaaminayey kooxdii u dagaalameysay adoonsiga dadka madow ee looga guuleystay dagaalkii sokeeye ee dalkaasi Maraykanka ka dhacay.
Golaha dowlada hoose ee magaalada Charlottesville ayaa sanadkan u codeeyey in la burburiyo taalooyinka astaanta u ahaa cunsurnimada. Markii ay kooxahan cunsuriyiinta ah magaaladaasi tageen ayaa waxaa iyaguna is abaabulay oo mudaharaad lid ku ah abaabulay shacabka kale ee magaalada ku dhaqan oo ay ku jiraan hogaamiyayaasha kaniisadaha iyo kooxaha u dhaq dhaqaaqa xaquuqda dadka madow kuwaasi oo banaanbax kale kala hortagay cunsuriyiinta.
Labada kooxood ayaa gacanta isula tagay Sabtidii waxaana xigtay weerarka loo adeegsaday gaadhiga oo lala beegsaday shacabkii la dagaalamayey cunsuriyiinta. Waxaana halkasi ku dhimatay haweenay kamid ahayd dadkii mudaharaadkaasi ka qeyb qaadanayey.
Dhinaca kale labo qof ayaa ku dhintay kadib markii ay soo dhacday diyaarad nooca helikopterka ah oo ay leeyihiin booliiska magaalada Charlottesville xili ay kusii jeeday goobta uu ka dhacayey mudaharaadka, waxaa la filayaa shilkaasi inuu ahaa cilad ku timid diyaaradaasi oo ay ku dhinteen duuliyihii waday iyo qof kale.
In badan oo kamid ah shacabka Maraykanka ayaa xiisadan ku eedeeyey Madaxweynaha xilka qabtay ee Donald Trump oo ay si weyn u taageeraan kooxaha cunsuriyiinta cadaanka Maraykanka oo wakhtigan aaminsan inay dib u hanteen awooda dalkaasi.
Inkastoo Trump ay wakhti dheer ku qaadatay inuu arrintan ka hadlo ayaa sheegay in falalka amniga wax u dhimaya aan loo baahneyn ayaa hadana dhinaca kale sheegay in rabshadaha ay sameeyeen dhinacyo badan oo ku sugan magaalda Charlottesville, hadaladaasi oo u muuqday inuu ku difaacayey kooxaha cunsuriyiinta oo iyagu bilaabay rabshadaha.